Fitsaboana tany an-trano :: Mihatsara ny toe-pahasalaman’ilay mpilomano voan’ny Covid-19 • AoRaha
Fivoaran’ny fitsaboana mankany amin’ny fahasitranana. Velombelombolo ilay mpilomano kalaza fahiny tamin’ny taranja lomano, Razafindrainibe Harivola Marie Sarah, taorian’ny fanombohany ny fitsaboan-tena tany antranony rehefa nifindran’ ny tsimok’aretin’ny Covid-19 izy. Telo ambin’ny folo andro izao no nihibohan’ izy sy ny vady amanjanany tao an-trano, ary nanaraka fitsaboana sy ny fepetra rehetra ho fisorohana ny famindrana ny valanaretina amin’ny manodidina.
« Manomboka mahare tsiron-kanina sy fofona aho, ankehitriny », hoy Razafindrainibe Harivola Marie Sarah. Tamin’ny 28 jona 2020 no voamarina fa mitondra ny tsimok’aretina ity tale teknika nasionalin’ny Federasiona malagasin’ ny lomano teo aloha ity. Nihiboka tao an-tranony sy notsaboina tao izy, taorian’izay. Naharitra telo ambin’ny folo andro, taorian’ny fanamarinana, no niatrika fitsaboana i Harivola. «Efa tsapako mihatsara ny fahasalamako, ankehitriny. Miafana tsikelikely ireo soritr’ aretina rehetra niseho tamiko, nanomboka ny 15 jona », araka ny fitantarany tamin’ny antso an-tariby, omaly.
Isan’ireo niara-nitsabo tena taminy tao an-trano ny vadiny sy ny zanany lahy, izay azo heverina ho nitondra ny tsimok’aretina ihany koa saingy tsy nisehoana soritr’aretina. “ N y rahavaviko, mpitsabo, no nikarakara anay nandritra an’izay roa herinandro izay. Manohy ny fitsaboana hatrany anefa izahay, mandrak’ankehitriny”, hoy hatrany izy.
Nampahafantariny ny fahavoazany mafy tao anatin’ny efatra andro voalohany tena nahavoa azy (28 jona – 1 jolay). Nanaintaina mafy tany anatin’ny havokavony, nefa soa fa efa miafana tsikelikely izany, ankehitriny, raha ny filazany.
Miantso an’ity mpanao fanatanjahantena ity indroa ireo mpiasan’ny fahasalamana, tamin’ ireo roa andro voalohany nahafantarana fa mitondra ny tsimok’aretina izy. “Nanafatra ny hakana ireo fanafody any amin’ny hopitaly izy ireo”, tamin’ izany, araka ny voalazany. Saika nentin’izy ireo tany amin’ny hopitaly mihitsy aza izy, araka ny fijoroany vavolombelona, saingy nisafidy ny hijanona an-trano hitsabo tena.
“Koha-maina nandalo no nahazo ny vadiko, raha aretin-tenda kosa no nianjady tamin’ny zanakay”, hoy izy. Ankoatra ireo fanafody dia nievoka “Ravintsara” inenina isan’andro ity fianakaviana ity ary voalazany fa nanampy betsaka azy ireo tamin’ny nandresena ny tsimok’aretina izany.
Firehetana goavana :: Lehilahy lehibe maty kila tao an-trano